Sarkaal u shaqaynayey hay?adda NRC oo caawa Galkacyo lagu dilay iyo raggii dilkaasi gaystay oo baxsaday. – Radio Daljir
Galkacyo, Nov 18 ? Sarkaal u shaqaynayey hay?adda Norwegian Refugee Council ?NRC? oo lagu magacaabi jiray Axmed Jamac Cawad, ayaa caawa fiidkii lagu dilay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug.
Marxuumkaan ayaa waxaa dilkiisa gaystay labo nin oo sida dad goob-jooga yaal ahi sheegeen ku hubaysnaa baskoolado kuwaasi oo baxday xilligii ay fuliyeen falkaasi dilka ah.
Dilka alle ha u naxariistee marxuub Axmed Jaamac Cawad, ayaa dhacay salaaddii makhrib kaddib xilli uu ka soo baxay masaajidka Dulqarnayn ee xaafadda is-raac ee magaalada Galkacyo, waxaana lagu toogtay kadinka hore ee masaajidka laga soo galo.
Ma cadda illaa iyo haatan cidda falkaasi gaystay, ciidanka amniga oo xilli dambe tagay goobtana uma suurtaglin in ay heleen dhagar-qabayaashii falkaasi ka dambeeyey.
Marxuubka caawa la dilay ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyey u shaqaynayey hay?adda NRC oo ah hay?ad ka shaqaysa arrimaha xaqootiga iyo barakacayaasha, waxaana uu horay ugu shaqayn jiray hay?adda kale ee iyana dhinaca xaqootiga ka shaqaysa ee DRC.
Muddo sannado ah magaalada Galkacyo waxay daris la noqotay falal ammaan darro oo kala duwan, ayna ugu horreeyaan dilalka abaabulan kuwaasi oo lagu waayey saraakiil badan oo dawladeed, nabadoono, aqoonyahanno iyo indheergarad badan oo ka tirsanaa qaybaha bulshada.
Hay?adaha ammaanka ee gobolka Mudug, iyo dawladda dhexe ee Puntland ayaa si rasmi ah ugu guul-darraystay hanashada amniga magaalada Galkacyo, waxaana aad u hooseeya rajada wax-qabad ee arrintaasi la xiriirta marka dib loo fiiriyo muddadii dheerayd ee dhibaatadaani ay soo jiitamaysay iyo sida aysan u muuqan is-baddal lagu tallaabsaday.